Islaamiyiinta Suuriya Oo Xabad Iskula Jeestay & Garabka Ku Xiran Alqaacidda Oo Xabad Joojin Soo Jeediyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xalab, Mareeg.com: Dagaalyahanada la magac baxay Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam (Daacish) eek u xiran Alqaacidda, qeybtooda dalka Suuriya ayaa lagu qasbay iney soo jeediyaan xabad joojin kadib markii 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay loo geystay khasaare laxaad, iyagoo la dagaallamay koox kale oo Islaamiyiin ah oo iyagoo isku dhinac ah ay la dagaalamayeen nidaamka uu hogaamiyo Bashaar Al-asad.
Kooxda la magac baxay Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam (Daacish) waxaa dagaal dhiig badan ku daatay la galay 8 kooxood oo isu tegay, lana magac baxay “Jeyshul Mujaadihiin” oo macnaheedu yahay Ciidamada Mujaahidiinta.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii bilihii lasoo dhaafay dagaalyahanada la magac baxay Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam (Daacish) ay bilaabeen ugaarsiga kooxihii ay isku safka ahaayeen ee ay la wada dagaalamayeen nidaamka uu hogaamiyo madaxweyne Bashaar Al-asad, taasoo keentay in caro badan loo qaado, laguna qaado dagaal xoog leh.
Kooxda ku xiran Alqaacidda ee Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam ayaa laga saaray magaalo lagu magacaabo Ataarib ee gobolka Xalab, kadib dagaal lagu hoobtay oo dhacay.
Wararka ayaa sheegaya in tobanaan ka mid ah dagaalyahanada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam lagu dilay ama la qafaalay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Xalab.
Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam ayaa qabatay in muddo 24 saac ah looga joojiyo dagaalka leysugu baheystay haddii kale ay ciidamadooda kala bixi doonaan aagaga dagaalka Xalab ee looga horjeedo nidaamka Bashaar Al-asad.
Kooxo u dhaqdhaqaaqa kacdoonka Suuriya ayaa sheegay in ilaa 60 ka mid ah dagaalyahanada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam lagu dilay dagaalo ilaa Jimcihii ka dhacayey magaalooyinka Xalab iyo Idlib oo ku dhow xadka dalka Turkiga.
Waxaa sidoo kale, wararku sheegayaan in ilaa 100 ka mid ah dagaalyanada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam gacanta lagu dhiyay, iyadoo dagaalka hadda dhacay lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee kooxaha mucaaradka dhex maray intii ay jireen.
Kooxda la magac baxday Ciidamada Mujahidiinta ee ka kooban 8-da garab ee isu tegay ayaa wacad ku maray iney meesha ka saarayaan dagaalyanada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaqa Iyo Shaam oo ku xiran Alqaacidda, ayna ku eedeeyeen iney ka leexdeen shareecada Islaamka.
“Annaga oo ah ciidamada Mujaahidiinta, waxaan ballan ku qaadeynaa inaan difaacno nafteena, karaamadeena, kheyraadkeen, dhulkeena, iyo inaan la dagaalano ciidamada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq kuwaasoo khilaafay sharciga Allle ilaa ay uga dhawaaqaan iney kala tageen” ayuu lagu yiri bayaan kazoo baxay kooxda la baxday Jeyshul Mujaahidiin.
Dagaalka u dhaxeeya kooxahan Islaamiyiinta ee dagaalka kula jiray madaxweynaha Suuriya Bashaar Al-asad ayaa ku saleysan loolan xagga awoodda oo la xiriira cidda hogaanka u qabaneysa dagaalka lagu jiro ciidamada bashaar Al-asad, waxaana horay u dhacay dilal iyo dagaallo ay isku qaadeen.